Vaovao - azo hatsaraina ny fahombiazan'ny fifandraisana amin'ny volafotsy
Ny fahombiazan'ny fiasan'ny fifandraisana volafotsy dia azo hatsaraina
Mba hisorohana ny fandoroana ny fifandraisana amin'ny volafotsy, ny terminal contact static dia miendrika endrika miolakolaka, ampahany mifanelanelana amin'ny fidirana eo afovoany. Noho izany ny arc dia tsy eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny may. Izy io dia karazana endrika fifandraisana tsara kokoa, ary mihatra hatrany ny fampiharana azy. Ny dingan'ny fiasan'ny fifandraisana dia alefa amin'ny takiana maromaro amin'ny fitaovana. Satria ny varahina dia manana fitarihana herinaratra tsara sy fitarihana hafanana. Hatraiza. Teboka avo kokoa, fanodinana mora. Noho izany dia ampiasaina be dia be izy io ho toy ny fifandraisana conductive ampahany amin'ny fanapahana herinaratra avo. Fa ny tanan'ny varahina dia mora simbaina, ny fihanaky ny fanoherana. Ka amin'ny mpandika faritra sasany, ny varahina dia mirakotra sosona volafotsy ivelan'ny fifandraisana lehibe.
Silver dia manana fitondran-tena tsara, ny horonantsary oksida dia mitarika, afaka manatsara ny fahombiazan'ny fifandraisana amin'ny varahina vita amin'ny volafotsy. Miaraka amin'ny fampiasana matetika ny mpandika fizaran-tany dia nitombo be ny fiakaran'ny volafotsy fifandraisana, dia mety ho fatiantoka lehibe ny fifandraisana, noho izany ny fanoherana ny hafanana amin'ny volafotsy, ny fanoherana ny fanoherana ny arc, ny fanoherana ny abrasion ary mametraka ny fepetra takiana ambonimbony kokoa. Ny fomba metallurgy vovoka dia nanokatra fomba vaovao amin'ny fampandrosoana ny fitaovam-pifandraisana.
Metallurgy vovoka fa tsy mampiasa metallurgical mahazatra, fa ny karazany roa amin'ny vovoka metaly mifangaro ao anaty bobongolo manindry. Ao amin'ny entona miaro (hidrogen) amin'ny dingan'ny fanadiovana. Io karazana volamena io dia tena fifangaroan'ny taiwan. Satria ny fizotrany dia mitovy amin'ny vokatra vita amin'ny seramika, izy io dia antsoina koa hoe firaka bobongolo. Ny mpandika fantsom-pandrefesana avo lenta dia ampiharina amin'ny tungsten varahina, nikela volafotsy, volafotsy, grafita ho fanoherana ny fifandonana amin'ny arc na ny arc. Ampiasaina amin'ny relay, contactors, air switch, fetra mikoriana, protector moto, switch micro, fitaovana enti-miasa, kojakojan-trano, elektrika mandeha amin'ny herinaratra (fanamoriana jiro ary fanombohana famindrana enta-mavesatra), fanovana fiarovana. Raha ampitahaina amin'ny oksida cadmium volafotsy, ny oksida volafotsy volafotsy dia tsy ahitana cadmium metaly misy poizina, izay misy ny oksida metaly manana fitoniana avo lenta, miaraka amin'ny fitondra mandeha amin'ny herinaratra sy ny hafanana, ao anatin'ny dingan'ny on-off dia misy fanoherana hafanana avo, fanoherana ny fikaohon-tany ary anti welding, mba hiantohana ny fahatokisana ny fiasan'ny fitaovana elektrika, hampitombo ny androm-piainana. Ary ny fampandrosoana haingana ny volafotsy volafotsy volafotsy, na dia ny sasany amin'ireo switch tsy mandeha amin'ny herinaratra aza nefa tsy manisy fiovana lehibe dia azo ampiasaina mivantana oksida vita amin'ny volafotsy hanoloana AgCdO. Ny fampiasana dia manomboka amin'ny 10A - 100A, amin'ny fampisehoana maro izay akaiky kokoa noho ny oksida cadmium volafotsy.
Misy habetsaky ny volafotsy mba hialana amin'ny antony mirehitra, terminal fifandraisana tsy miova amin'ny endrika miolakolaka, fifandraisana mavitrika amin'ny tapany afovoan'ny fizotrany. Noho izany ny arc dia tsy eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny may. Izy io dia karazana endrika fifandraisana tsara kokoa, ary mihatra hatrany ny fampiharana azy. Ny dingan'ny fiasan'ny fifandraisana dia alefa amin'ny takiana maromaro amin'ny fitaovana. Satria ny varahina dia manana fitarihana herinaratra tsara sy fitarihana hafanana. Hatraiza. Teboka avo kokoa, fanodinana mora. Noho izany dia ampiasaina be dia be izy io ho toy ny fifandraisana conductive ampahany amin'ny fanapahana herinaratra avo. Fa ny tanan'ny varahina dia mora simbaina, ny fihanaky ny fanoherana. Ka amin'ny mpandika faritra sasany, ny varahina dia mirakotra sosona volafotsy ivelan'ny fifandraisana lehibe.
Silver dia manana fitondran-tena tsara, ny horonantsary oksida dia mitarika, afaka manatsara ny fahombiazan'ny fifandraisana amin'ny varahina vita amin'ny volafotsy. Miaraka amin'ny fampiasana matetika ny mpandika fizaran-tany dia mitombo be ny fiakaran'ny toetr'andro, ny fifandraisana amin'ny tany dia mety ho fatiantoka lehibe, noho izany ny fanoherana ny hafanana amin'ny volafotsy, ny fanoherana ny fanoherana ny arc, ny fanoherana ny abrasion ary mametraka ny fepetra takiana ambonimbony kokoa. Ny fomba metallurgy vovoka dia nanokatra fomba vaovao amin'ny fampandrosoana ny fitaovam-pifandraisana.